पुरानै संस्कार र प्रवृत्तिमा राजनीतिक दलहरु | चितवन पोष्ट दैनिक
पुरानै संस्कार र प्रवृत्तिमा राजनीतिक दलहरु
२०७० पुष १०, बुधबार ०३:५२ गते
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नेपालमा नया“ संविधानसभाले पूर्णता पाउन सकेको छैन, जसबाट सरकार निर्माण तथा संविधान निर्माणका सारा कामहरु पछाडि धकेलिँदै छन् । यसले गर्दा नै देशमा लम्बिँदै गएको राजनीतिक संक्रमणकाल झनै लामो र जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । राजनीतिक सहमतिका गा“ठाहरु एकपछि अर्काे गर्दै कसिँदै गएको देखिन्छ । जनताको म्यान्डेटमा नया“ संविधानसभाको गठन भएपछि राजनीतिक सहमति र संविधानसभाले गति लिन्छ, जसबाट नेपाली जनताले समयमै संविधान प्राप्त गर्दछन् भन्ने सबैको अपेक्षा थियो । तर, अहिलेको पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरुलाई अध्ययन गर्दा पुरानै संविधानसभामा देखिएका राजनीतिका गलत संस्कार र प्रवृत्तिहरु अहिले पनि दोहोरिँदैछन् । समय बदलियो, जनताले दिएको म्यान्डेटको स्वरुप बदलियो, संविधानसभा नया“ गठन हुन लाग्यो तर राजनीतिक दलहरुमा रहेको राजनीतिक स्वार्थ तथा संकीर्ण मानसिकतामा परिवर्तन आउन सकेन । यही राजनीतिक संकीर्ण मानसिकताकै कारणले गर्दा नै संविधानसभाको निर्वाचन भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि संविधानसभाले पूर्णता पाउन सकेन । निर्वाचनमा ठूलो पार्टी बनेको नेपाली कांग्रेसमा ठूलो पार्टी हुनुको घमण्ड देखिने, एमाले दोस्रो पार्टी भनेर निहुँ खोज्ने र एमाओवादी पराजित भइयो भनेर अरुमाथि रिस पोख्ने क्रम चलिरहेसम्म देशमा संविधान निर्माण र सरकार गठनको मुद्दा अलपत्र परिरहने छन् । नेपाली कांग्रेसले ठूलो दलको नाताले खुला छातीले पार्टीगत स्वार्थलाई त्यागेर अन्य दलहरुलाई साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छ भने एमाओवादीले जनताले निर्वाचनमार्फत् दलहरुलाई दिएको म्यान्डेटलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । संविधानसभा सम्पन्न भइसकेपछि धा“धलीका नाममा संविधानसभामा नै जान्न भन्नु उसको निकै संकीर्ण तथा नीच मानसिकताजस्तो देखिन्छ । कि त उसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै स्वीकार गर्नुहु“दैन र स्वीकार गरेपछि लोकतन्त्रमा निर्वाचनको मह¤वलाई बिर्सन मिल्दैन । हिजो अघिल्लो संविधानसभामा जसरी अन्य एमाले, कांग्रेसजस्ता साना दलहरुले एमाओवादीलाई सरकार गठनको मुद्दामा मैदान खाली गरेका थिए, त्यसैगरी अहिले एमाओवादीले ठूला दलहरुको आदेश, आज्ञालाई शिरोधार्य गर्नुपर्दछ । जो सानो छ, उसले ठूलो दलस“ग सहयोगी र सम्मानको बाटोलाई अपनाउनुपर्छ । अरुलाई सम्मान गर्न जानेमा आफूले पनि सम्मान पाइन्छ भन्ने दर्शनलाई एमाओवादीले अहिलेको अवस्थामा बिर्सन मिल्दैन ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिकका लागि सांसद्हरुको नाम सिफारिस गर्न दिएको समयसीमालाई पटकपटक सारेर राजनीतिक दलहरुले गलत कार्य गरिरहेका छन् । चाहे राजनीतिक दलहरु हुन् वा हरेक व्यक्ति– सबैले विधि–विधान र समयलाई ख्याल गर्नुपर्छ । दलहरुको कमजोरीका कारण नियम–कानुनलाई आफूअनुकूल हिँडाउन पाइँदैन । दलहरुले समानुपातिक उम्मेदवारहरुको सूचीलाई निर्वाचन आयोगमा समयमा बुझाउन नसक्नु दलको आन्तरिक कमजोरी हो, जसले गर्दा नै सम्पूर्ण राष्ट्रिय एजेन्डाहरुको समाधानमा ढिलाइ हु“दैछ । दलहरुभित्रको आन्तरिक गुटबन्दी, सांसद्का लागि आकांक्षीहरु बढ्नु आदि जस्ता प्रमुख विषयहरुले गर्दा नै समयमा उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा सूची बुझाउन सकेनन् । यो पदलोलुप प्रवृत्ति राजनीतिक दलहरुको पुरानो संस्कार तथा परम्परा हो, जसले आफूलाई निकै परिवर्तनकारी तथा अग्रगमनको हिमायती भन्ने एमाओवादीलाई गाँजेको छ । बाहिर देख्दा एमाओवादीले संविधानसभामा जान्नँ भनेर धम्की दिँदै छ भने आन्तरिक रुपमा समानुपातिकको सूची तयार गर्न पनि उसलाई हम्मेहम्मे परेको छ । कांग्रेस पार्टी आफैँमा विभाजित छ, एकथरी अझ म्याद थप्दै गएर भने पनि एमाओवादीलाई संविधानसभामा जसरी पनि लैजानुपर्छ भन्दैछन् भने अर्काे पक्ष एमाओवादी नआए पनि अगाडि बढ्नुपर्दछ, म्याद थप्नुहु“दैन भन्ने पक्षमा छन् । कुनै बेला एमाओवादीस“ग कडा रुपमा प्रस्तुत हुने शेरबहादुर देउवा अहिले उनीहरुस“ग नरम बन्दै नजिकिन पुगेका छन् भने कुनै बेला एमाओवादीस“ग नरम देखिने रामचन्द्र पौडेलहरु अहिले कडा रुपमा प्रस्तुत हु“दैछन् । कांग्रेसभित्र हुने गुटको राजनीतिले गर्दा देशको राजनीतिक सहमति तथा निर्णय प्रक्रियाको बाटोमा विभिन्न बखडाहरु सिर्जना हु“दै गएका छन् । कुन दलस“ग नजिक हुने र टाढा हुने भन्ने कांग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरुको विचार सत्ता र कुर्सीको बार्गेनिङस“ग जोडिन पुगेको देखिन्छ ।
राजनीतिक दलहरुको हरेक दिनका गतिविधिहरुलाई अध्ययन गर्दा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुनुअघिजस्तै सहमति, समझदारीका नाममा नेताहरुको घर तथा होटेलका कोठाहरुमा गोप्य बैठकहरु बस्ने कोठे राजनीति फेरि पनि सुरू हु“दै गएको देखिन्छ । प्याकेजको सहमति भन्यो, यति बु“दे उति बु“दे भन्यो तर अन्ततः हातमा लाग्यो शून्य हु“दैछ । अघिल्लो दिनमा कहिले कांग्रेसस“ग एमाओवादीको सहमति भन्यो, भोलिपल्ट एमालेस“ग भन्यो, आखिर के सहमति भएको हो भनेर सोध्दा कसैले दिन सक्दैन । आज सहमति बन्छ, फेरि भोलि सहमति तोडिँदै जान थालेको छ । यसरी कोठामा सहमति गरेर राजनीति गर्ने हो भने किन सार्वभौम संविधानसभा चाहियो र ! नया“ संविधान पनि होटलको कोठामा बसेर सहमतिमा ल्याएको भए भइहाल्थ्यो नि, किन अरबौँ खर्च गरेर निर्वाचन गर्नुपर्दथ्यो ! राजनीतिक निर्णयहरु गर्न जननिर्वाचित संविधानसभाजस्तो अधिकार सम्पन्न तथा सार्वभौम कोइराला निवास तथा प्रचण्ड निवासका बैठकहरु हुन सक्दैनन् । राजनीतिक दलहरुका मह¤वपूर्ण निर्णयहरु गर्ने अधिकार दलहरुको कोठे बैठकलाई होइन, संविधानसभालाई नै दिनुपर्दछ । यसका लागि पुरानो उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको पनि कुनै तुक छैन । अब उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमतिका नाममा दुई–चार जना नेताहरु रहेको समितिलाई संविधानसभाभन्दा अधिकार सम्पन्न बनाउन पाइँदैन । राजनीतिक छलफल, बहसहरु सबै संविधानसभामा नै हुनुपर्दछ । नेताहरु भेट्नलाई, गफ गर्नलाई अब उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति चाहिँदैन, जुन नेताले जसलाई जसरी पनि भेट्न स्वतन्त्र छ, जसले संविधानसभाको सर्वाेच्चतालाई खण्डित गर्ने काम मात्र गर्दछ । हिजो रेग्मी नेतृत्वको गैरदलीय सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्नलाई बनाइएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति आज नवनिर्वाचित संविधानसभा गठन भएको अवस्थामा आवश्यक पर्दैन । सधैँ समितिले देश चलाइरहने हो भने र तिनै नेताहरु देशको राजनीतिमा हाबी हुने हो भने देशमा परिवर्तन र अग्रगमनको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । यो देश सधैँ कोइराला, दाहाल र खनाल रहेको शीर्षस्थ समितिको बन्धक मात्र बन्नुहु“दैन ।
राजनीतिक दलहरुले अहिले ताजा जनादेशलाई भन्दा राजनीतिक स्वार्थ र बहकाउमा परेर छलफलहरु अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ, जसले गर्दा सरकार बन्न नै छ महिना लाग्ने संकेतहरु देखिँदैछन् । राजनीतिक दलहरुलाई अमूल्य मत दिएर जनताले विजयी त गराए, तर विजयपछिको राजनीतिक व्यवस्थापन हुन सकेन । ठूला दलहरुले अझैसम्म समानुपातिकको सूचीका आधारमा कस्तो नेतालाई संविधानसभामा पठाउने भन्ने मापदण्ड बनाउन सकेनन् । यसले गर्दा सबै दलका जिल्लास्तरका नेताहरु आफ्नो नाम सिफारिस गर्न आग्रह गर्दै नेताहरुका घरघरमा चहार्ने क्रम बढिरहेको छ । राजनीतिक दलका गतिविधिहरुलाई अध्ययन गर्दा जनताले दलहरुप्रति गरेको आशा र भरोसा कमजोर बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरुको शक्ति–सन्तुलन र सम्बन्ध फेरि २०४८ सालतिरकै जस्तो रुपमा फर्किन खोजेको छ । अघिल्लो संविधानसभामा कांग्रेसको प्रधान शत्रु एमाओवादी थियो, तर अहिले कांग्रेसभित्र एमालेलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी वा शत्रुका रुपमा चित्रित गर्न खोजिँदैछ । एमाओवादीस“ग कांग्रेस नजिक हु“दै जानुले त्यही अर्थलाई संकेत गर्दछ । फेरि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई आधार मान्दा भने एमाले र कांग्रेसका एजेन्डाहरु एकापसमा निकट देखिन्छन् । एमाले र कांग्रेसको गठबन्धनमा सरकार पनि स्थिर बन्ने तथा संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि सहज बन्ने हु“दाहु“दै त्यसो हुन नसक्नुमा बाहिरी शक्तिको चाहनाले राष्ट्रिय एजेन्डा प्रभावित बन्न खोजेको छनक पाइन्छ ।
विशेषतः भारतले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हेर्न चाहेको छैन । दोस्रो ठूलो दल बाहिर रहे सरकार अस्थिर बन्ने र नेपालमा संविधान पनि नबन्नेमा भारत ढुक्क छ, जसबाट उसलाई चलखेल गर्न सधैँ सजिलो हुने गर्दछ । कांग्रेस र एमाले आफैँमा अलग तथा विभाजित भएका देशले केही पाउँदैन भन्ने यथार्थलाई पनि राजनीतिक दलहरुले बुझ्न सकेका छैनन् भने अर्काेतर्फ कांग्रेस र एमाले आपसमा फाट्नुलाई एमाओवादीले आफ्नो सफलताका रुपमा बुझ्दैछ । राजनीतिक दलहरुमा बदलाको भावना लिएर अगाडि बढ्ने सोच आफैँमा डरलाग्दो देखिन्छ, जसले देशलाई झनै अन्धकारमा धकेल्दै छ । एमाओवादी संविधानसभा निर्वाचनमा हारेर पनि निर्णय प्रक्रियामा हाबी हुन खोजेर जनताको जनमतको पनि अपमान हु“दैछ । तसर्थ, आपसमा सत्ताको बाँडफाँड, मोलमोलाइमा भुलेर संविधान निर्माणको एजेन्डाले प्राथमिकता पाउन नसक्नु हिजोको असफल संविधानको गलत प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति मात्र हो, जसको अन्त्य समयमा नै संविधान बनाउन अनिवार्य छ ।